Niantso ny hanaovana fifidianana mialoha amin’ny volana Jona mba hanamaivanana ny krizy ny Praiminisitra Armeniana · Global Voices teny Malagasy
Niatrika fitakiana fametraham-pialana ny filoha nanomboka ny volana Novambra
Voadika ny 31 Marsa 2021 5:26 GMT
Pikantsary, Praiminisitra miresaka amin'ny vahoaka mpanohana azy marobe. https://youtu.be/GxaTJ4u9ghE
Nanambara ny hanaovana faingana ny fifidianana parlemantera amin'ny 20 Jona mba hanamaivanana ny fitomboan'ny krizy politika ny praiminisitra amperinasa any Armenia Nikol Pashinyan ny 18 Martsa teo.
Nilaza ny Praiminisitra raha nanambara ny vaovao tao amin'ny Facebook fa nifanarahana tamin'ny mpitarika ny antoko Prosperous Armenia [Armenia Miroborobo], antoko mpanohitra lehibe indrindra ny fanapahan-kevitra.
Notakiana imbetsaka ny filoham-pirenena hametra-pialana nanomboka ny volana Novambra rehefa nanao sonia fifanarahana momba fandriampahalemana namarana ny ady tamin'i Haut-Karabakh izay naharitra enina herinandro, izay nolazain'ny Armeniana maro fa tsy mifandanja satria manome tombony be loatra an'i Azerbaijan.
Mamela an'i Azerbaijan hanara-maso ny iray ampahatelon'ny faritra mitoka-monina any Haut-Karabakh sy ireo distrika miisa fito manodidina azy ny fifanarahana tany Moskoa. Raha tafiditra ao anatin'ny zaratany Azerbaijani ny faritra ary ekena iraisam-pirenena fa anisan'i Azerbaijan dia teo ambany fifehezan'ny foko Armeniana izany nanomboka ny taona 1994.
Mamaritra ny fisian'ny tafika Rosiana mitandro ny fandriampahalemana any amin'ny tsipika manasaraka ny faritra nandritra ny dimy taona farafahakeliny ihany koa ny fifanarahana.
Maro ireo Armeniana no tsy afa-po tamin'izany fifanarahana izany, ary nisy ny fihetsiketsehana faobe manohitra ny governemanta nitranga teny an-dalamben'ny renivohitra Yerevan sy tany amin'ireo tanàna hafa kely kokoa. Ho fiarovana azy dia nilaza ny Praiminisitra fa ny fifanarahana no hany fomba tokana hampitsaharana ny fifandrafiana sy mba tsy hirosoan'ny fahavalo any amin'ilay toerana mitoka-monina.
Tamin'ny faran'ny volana Febroary, mpikambana ambony miisa 40 ao amin'ny tafika Armeniana no nanao sonia taratasy mitaky ny fametraham-pialan'i Pashinyan. Ho valin'izay, noroahin'ny PM ny lefitry ny lehiben'ny etamazaoron'ny tafika, Kolonely Onik Gasparyan, ka nofaritany ho toy ny “fikasana hanongam-panjakana” ilay taratasy.
Ary tamin'ny 15 Martsa, nanohana ny fitakiana ny fametraham-pialan'ny PM tamin'ny lahatsoratra navoaka tao amin'ny tranonkalam-baovao ilur.am i Ter-Petrosian, filoha voalohany tao Armenia nanomboka ny taona 1991 ka hatramin'ny taona 1998. Nilaza ity mpitondra teo aloha ity fa tokony hiala mba ho “tombontsoam-pirenena” i Pashinyan, ary ny praiminisitra lefitra tsy manana loko politika kosa no miandraikitra ny fotoana fohy hanaraha-maso ny fifidianana parlemantera.
Efa nandeha ny resaka momba ny fifidianana kasaina atao mialoha nanomboka ny volana Desambra. Raha nandà ny fahafaha-manao izany ny antokon'ny fitondrana Armeniana My Step Alliance, [Mpiara-dia ny dingako] ny herinandro lasa teo ny filoham-pirenena Armen Sarkissian sy Pashinyan no nilaza izany.
Raha ny tatitra tany am-panombohana, mikasa ny hilatsaka amin'ny fifidianana nambara ho amin'io Jona io i Pashinyan. Teo aloha, nanitrikitrika ny mpanohitra fa tsy misy ny fifidianana mialoha raha tsy aorian'ny fialan'i Pashinyan sy ny fandravana ny parlemanta ankehitriny.
Tany am-piandohan'ity volana ity, nandritra ny fihetsiketsehana manohana azy, dia hoy i Pashinyan hoe “Andao hiroso amin'ny fifidianana hijerena ireo olona mitaky ny fametraham-pialana. Ny vahoaka ihany no afaka manapa-kevitra ny olona izay tokony hijanona eo amin'ny fitondrana.”